Ny interface DTS Retort monitor dia interface interface Controller feno, izay mamela anao ...
Ny retort rotary fanitrihana rano dia mampiasa ny fihodinan'ny vatana mihodina hahatonga ny atiny hikoriana ao anaty fonosana, mandritra izany fotoana izany dia aondraho ny rano fanodinana hanatsarana ny fitovian'ny hafanana ao anaty valiny. Ny rano mafana dia voaomana mialoha ao anaty fitoeran-drano mafana hanombohana ny fizotran'ny fanamorana amin'ny hafanana ambony ary hahatratra ny fiakaran'ny maripana haingana, aorian'ny fanamontsamontsana, ny rano mafana averina averina ary averina amin'ny tanky mafana mba hahatratrarana ny tanjon'ny fitsitsiana angovo.
Raha mamoaka etona ao amin'ny habakabaka ny valin-kafatrao, ny rafitra fanarenana angovo autoflave DTS dia hanova an'io angovo tsy ampiasaina io ho rano mafana azo ampiasaina nefa tsy hisy fiatraikany amin'ny fenitra fanodinana hafanana FDA / USDA. Ity vahaolana maharitra ity dia afaka mamonjy angovo be dia be ary manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fandefasan'ny orinasa.
Harom-bolo feno fanafoanana manokana
Harona natokana ho an'ny retort spray rano mety ho an'ny retort spray an'ny rano, ampiasaina indrindra amin'ny tavoahangy, fonosana.